एनआरएनएको सांगठनिक पुनरसंरचना तथा विधान संसोधन प्रस्ताव पारित
काठमाडौं, ७ भदौ–गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सांगठानिक पुनरसंरचना तथा विधान संसोधन प्रस्ताव सर्वसम्मले पारित भएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय समिति (आइसीसी) को शनिवार सम्पन्न अनलाइन कन्फ्रेन्स कल मार्फत भएको बैठकले सदस्यता शुल्क, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिषदको निर्वाचन प्रकृया, विद्युतीय मतदान, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन लगायतका क्षेत्रमा हुने पुनरसंरचना सम्वन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो ।
बैठकमा संघका सचिव गौरी राज जोशीले एमआइएस सिस्टम, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले आर्थिक प्रस्ताव र संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले निःशुल्क सदस्यता, महासचिव डा. हेमराज शर्माले विधान संसोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । पारित भएको प्रस्तावलाई आगामी विशेष साधारणसभामा प्रस्तुत गरिने संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले जानकारी दिए । बैठकले विश्वभर छरिएका सबै राष्ट्रिय समितिमार्फत वितरण हुने पञ्जिकृत सदस्यता निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघले यसअघि स्थापना कालदेखि ५ डलर अनिवार्य लिदै आएकोमा अब सो प्रावधान खारेज गर्ने भएको अध्यक्ष पन्तले बताए । बैठकको निर्णय अनुरुप संघका सबै राष्ट्रिय समितिको निर्वाचन प्रकृया केन्द्रीय प्रणाली अनुरुप हुनेछन् । संघको राष्ट्रिय समितिमा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न केन्द्रीय प्रणाली (एमआईएस) मा नाम दर्ता गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरिन लागिएको छ ।
बैठकमा वक्ताहरुले संघको राष्ट्रिय समितिको निर्वाचन र केन्द्रीय समितिको नेतृत्व चयन एउटै मितिमा एकै पटक गर्न सुझाव दिएका थिए । बैठकले गैर आवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि लाग्ने २ सय अमेरिकी डलर खारेज गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।
यसका लागि बैठकले संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा सचिव गौरीराज जोशी, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ र निवर्तमान प्रवक्ता तथा विधान समितिका संयोजक भुषण घिमिरे रहेका छन् । सो कार्यदलमा आवश्यकता अनुसार सदस्यहरु थप गर्न सकिने जनाइएको छ ।
तर, कार्यदलले नीतिको व्यवहारिकतालाई समेत ध्यान दिएर प्रतिवेदन तयार गरि दुइ हप्ता भित्रमा संघको पदाधिकारी बैठकमा पेश गर्नुपर्ने छ । सो नीति गैर आवासीय नेपाली संघको बिशेष साधारण सभामा पेश गरिने छ । बैठकमा उपाध्यक्ष मन केसी र रविना थापाले संघका प्रस्तुत प्रस्तावमा थप छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे । गत हप्ता सम्पन्न संघको पदाधिकारी बैठकले पारीत गरेको प्रस्तावको पक्षमा अधिकांशले समर्थन जनाएका थिए । सचिव जोशीले संघका सदस्यहरुको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिने स्पष्ट पारे । बैठकमा संघका पदाधिकारीहरु लगायत एक सय भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
पैसाले परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने चुनावी प्रणालीको अन्त्यः अध्यक्ष पन्त
प्रस्ताव पारित भएपछि अध्यक्ष पन्तले अनलाइन मतदान र सदस्यता निशुल्क गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको बताए । नेपालमा प्रतिनिधिहरु गएर चुनाव गर्दा विभिन्न समस्याहरु देखिएको बताउँदै ठूलो खर्च गरेर आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको स्पष्ट पारे । ‘निर्वाचनलाई अनलाइन प्रविधिमा रुपान्तरण गर्दा नेपालमा गएर लाइन लागेर भोट हाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अब जो जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत भोट हाल्न सकिन्छ’ उनले भने,‘अनलाइनबाट भोट हाल्ने भएपछि नेपालमा जानु परेन ।’
निर्वाचनमा देखिएका विकृतिप्रति सचेत नभए एनआरएनएको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह उब्जिने भएकाले पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिएको अध्यक्ष पन्तले बताए । उनले पैसाकै बलमा परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेरै छाड्ने आफनो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन आउँन थालेकोमा खुसी समेत व्यक्त गरे ।
‘स्वास्थ्यकर्मीलाई निरुत्साहित गर्ने घटना सुन्नुपर्दा दुःख लागेको छ’
प्रदेश १ मा संक्रमितको संख्या २ हजार ६ सय ५९ पुग्यो